ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်နေ့က လက်ပန်းတောင်း အရေးနှင့် ပက်သက်ပြီး ရန်ကုန်မြို့တွင် သံဃာထုက ဆန္ဒထုတ်ဖော်စဉ်။
သံဃာတော်တွေဟာ "၁၂ ၊ ၁၂ ၊ ၁၂ သံဃာတော်များ အကြမ်းဖက်ခြင်းကို ရပ်တန့်ပေးပါ" ဆိုတဲ့ စာသားပါ လက်ကိုင်ပိုစတာတွေနဲ့ သာသနာ့အလံတော်တွေကို ကိုင်ဆောင်ရင်း အလံပြဘုရားလမ်းတလျှောက် မေတ္တာပို့ရွတ်ဆိုပြီး ဆူးလေစေတီတော်ကို စီတန်းလမ်းလျှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
သံဃာတော်တွေဟာ မွန်းလွဲ ၂ နာရီအချိန်မှာ ရေတာရှည်လမ်းဟောင်းကိုဖြတ်ပြီး ဦးထောင်ဗိုလ်လမ်းကနေ တစ်ဆင့် အလံပြဘုရားလမ်းအတိုင်း စီတန်းလှည့်လည်ဆန္ဒပြတဲ့အခါ လမ်းတလျှောက်မှာရှိတဲ့ ပြည်သူလူထု ရာပေါင်းများစွာကလည်း သံဃာတော်တွေနဲ့အတူ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း စီတန်းလမ်းလျှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီကနေ့ဆန္ဒပြပွဲမှာ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ်ကလည်း သံဃာတော်တွေရဲ့ ဦးဆောင်မှုအောက်မှာ ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။
လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြတဲ့ သံဃာတော်တွေဟာ မွန်းလွဲ ၃ နာရီမှာ ဆူးလေစေတီတော်ကို ရောက်ရှိပြီးနောက် စေတီတော်ကို လက်ယာရစ်လှည့်ပြီး မြို့တော်ခန်းမရှေ့မှာ စုဝေးကာ သံဃာတော်တွေရဲ့ အစိုးရကို တောင်းဆိုထားတဲ့ တောင်းဆိုချက် ၅ ရပ်ကို ဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့မှာ ရာနဲ့ချီတဲ့ သံဃာတော်တွေ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ မန္တလေး ၊ မုံရွာ ၊ ကလေး ၊ စစ်တွေ ၊ ပခုက္ကူ ၊ ချောက် ၊ ပြည်၊ ဝါးခယ်မ ၊ ပုသိမ် ၊ စတဲ့ မြို့ကြီးတွေမှာလည်း သံဃာတော်တွေရဲ့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
ဆရာတော် သံဃာတော်များ ဘုရား - တပည့်တော်ကလဲ ဘုန်းကြီးလူထွက်ပါဘုရား။ သံဃာတော်များက ဒကာ၊ဒကာမများ အတိဒုက္ခရောက်နေသည်ကို မကြည့်ရက်တာ ကို တပည့်တော် လက်ခံပါသည်ဘုရား။ ဒါပေမယ့် မင်းအရေး ဆိုသည်မှာ တွေးရခက်ပါသည်ဘုရား။ လက်ရှိအစိုးရ လုပ်နေတဲ့ လုပ်ရပ်များကို မှားသည် မှန်သည်ကို ထောက်ပြတာကိုလဲ တပည့်တော် သဘောတူပါသည်ဘုရား။ ဒါပေမယ့် ခံစားချက်တွေပြင်းထန်လွန်း ပြီးစိတ်ထင်တိုင်းလုပ်ရင်လဲ ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေ တတ်ပါသည်ဘုရား။ စဉ်းစားတော်မူကြပါဦးဘုရား။
Referring to your remark,what we have to do, what we must show our wish for this bitter event? Should we close our eyes, ears and mouths to pay to the man who destroyed or still destroying our country?
နေရပ်- Mohnyin) (S.Korea
နိုင်ငံရေးမှာ ဘုန်းကြီးတွေဝင်ရှုပ်လို့ စစ်အာဏာ အသိမ်းခံရသည့်အဖြစ်မျိုးမရောက်စေလိုပါကြောင်း